ट्यांकरभित्रै प्वाल पारेर पेट्रोल चोरी - नेपालबहस
ट्यांकरभित्रै प्वाल पारेर पेट्रोल चोरी
५ मंसिर, काठमाडौं । ट्यांकर भित्रै स्थायी फल्स च्याम्बर अर्थात प्वाल बनाएर पेट्रोल चोरी हुने गरेको खुलासा भएको छ । भारतको बरौनीबाट काठमाडौंको थानकोट डिपोमा पेट्रोल ढुवानी गर्ने दुईवटा ट्यांकरले यसरी पेट्रोल चोरी गर्ने गरेको खुलासा भएको हो ।
वीर बेताल आशिर्वाद कम्पनीको ना ७ ख ३९९६ र ना ७ ख २९९५ नम्बरका दुईवटा ट्यांकरमा मापदण्ड विपरीत थप अर्को च्याम्बर बनाएर चोरी गर्ने गरेको भेटिएको हो ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार स्थायी रुपमै वेल्डिङ गरी ट्यांकरमा नयाँ च्याम्बर बनाएर चोरी गरेको भेटिएको हो । प्रारम्भिक अध्ययनमा एउटा ट्यांकरले एक पटकमा झण्डै एक लाख रुपैयाँ बराबरको एक हजार लिटर पेट्रोल चोरी गर्ने गरेको देखिएको उनको भनाइ छ । प्राविधिक बाहेकले पत्ता लगाउन नसक्ने गरी जडान भएको फल्स च्याम्बर मालिकको मिलोमतो बिना चालक मात्रैले गर्न नसक्ने निगमको अनुमान छ ।
पेट्रोल चोरी गर्ने सो ट्यांकरका मालिकहरु प्रज्ज्वलराज भट्ट, दीपेन्द्र बहादुर बम र सदेन व्यञ्जनकार रहेको पनि निगमको भनाई छ । पेट्रोल चोरीमा संलग्न ट्यांकरलाई निगमले १५ लाख रूपैयाँ हर्जना तिराउने प्रारम्भिक निर्णय भएको भएको छ । थप कारबाहीको लागि गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई पत्राचार गरिएको पनि निगमले जनाएको छ ।
नेपालकै दोस्रो ठूलो पेट्रोलियम भण्डारण गृहको शिलान्यास २ हप्ता पहिले
डिजेल र मटितेलको मूल्य १ रुपैयाँ घट्यो २ महिना पहिले
दुईनाले बन्दुकसहित पाँच जना पक्राउ १७ मिनेट पहिले
क्लब स्थापना दिवसका अवसरमा विद्यालयलाई सहयोग २३ मिनेट पहिले
विद्यालयमा दिइने सजायको स्वरूप बदलियो ३२ मिनेट पहिले
बुन्डेसलिगामा बार्यन जित्दा हल्याण्डको डर्टमुण्ड पराजित ५९ मिनेट पहिले
नेपालमा थप १६६९ जनालाई संक्रमण पुष्टि, काठमाडौंमा मात्रै ९५७ संक्रमित ७ दिन पहिले
भारतमा तुफानका कारण पाँच जनाको मृत्यु, सयभन्दा बढी घरमा क्षति २ दिन पहिले
किसानलाई वितरण गर्न ल्याइएको नर्सरी सम्बन्धी सामग्री तथा बीउ ६ दिन पहिले
महासंघका अधिकांश पुर्व अध्यक्षहरुको मतदातालाई आग्रह : यसपाली वरिष्ठ उपाध्यक्षमा किशोर प्रधान ( भिडियोसहित ) ५ दिन पहिले
कोरोनाले होटल संघका निवर्तमान अध्यक्ष अमर शाक्यको मृत्यु १ हप्ता पहिले
सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध स्वास्थ्य मन्त्रालयको पूनरावलोकन निवेदन ४ हप्ता पहिले
शुक्रराज ट्रपिकलले तोक्यो कोभिड–१९ को उपचार खर्च ४ हप्ता पहिले
आजदेखि सिमकोटका विद्यालयमा पठनपाठन शुरु ४ हप्ता पहिले
हुम्लाका विद्यालय बन्द, आवतजावतमा रोक ! १ हप्ता पहिले
म्याग्दीको पहिरोमा बेपत्ता थप एक जनाको शव भेटियाे ५ महिना पहिले
बाँकेमा थप एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु १ महिना पहिले
डोल्पामा फोन सेवा अवरुद्ध हुँदा पत्रकार, कर्मचारी, स्थानीयवासी हैरान ! १ वर्ष पहिले
होम क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएकी बालिकाको रिपोर्ट नेगेटिभ ५ महिना पहिले